Chrome OS inoburitsa yakawedzera Gnu / Linux divi ine yekuvandudza | Linux Vakapindwa muropa
Kune mibvunzo mizhinji nemakakatanwa nezvekuti kana kwete Google's Chrome OS kugoverwa kweGnu / Linux. Ini pachangu, ndinofunga kuti Chrome OS iri kugoverwa kweLinux asi haisi GNU, kunyangwe kuve nechinhu ichi kunoreva kuti rimwe zuva kwete kare kare Mahara Software maapplication ari paChannel OS.
Google inoziva izvi uye nguva pfupi yadarika iri kushanda kuti zvikwanisike. Kuburikidza neiyo Chrome OS yekuvandudza chiteshi, iyo Terminal application yaonekwa, ndiko kuti, terminal senge iyo yatinayo mukuparadzira kwedu kweGnu / Linux.Ichi chishandiso kana chinongedzo chichatibvumidza kuti tifambe kuburikidza neanoshanda system uye kunyangwe shandisa zviitwa zvine yedu terminal, nekudaro uchibvumira kumisikidzwa kwevamwe Gnu / Linux kunyorera. Zvirinani mune dzidziso. Ehezve, pamusoro pekunge uine terminal yekumhanyisa iyo inosimudza, chirongwa ichi chinoda mamwe maraibhurari uye zvikamu kuti zvishande nemazvo, asi kuoneka kwechishandiso ichi kunotora imwe nhanho yakanangana neFree Software uye kuiswa kwayo muChannel OS.
Google yasimbisa kuti ndizvo kushanda mukugadzirisa maviri boot kuChannelbook, ichibvumira kuve neChrome OS uye kugoverwa kweGnu / Linux pachigadzirwa chimwe chete. Asi zvese izvi zvichiri mukuvandudzwa uye hatigone kuzvinakidzwa kunze kwekushandisa kwechitatu-bato izvo zvisingatsamire paGoogle kana Chrome OS.
Nehurombo izvi ndezve chete zveyemugadziri modhi, ndokuti, yemachromebook ayo ane iyo mod modhi yakaitwa. Kuti isu tichafanirwa kumirira kuve neTerminal app pane yedu laptop neChorme OS. Kunyangwe, kana tichifunga nezve iyo nguva iri pakati pezvinhu zvitsva zveGoogle Chromium uye kugona kwayo kuGoogle Chrome, iyo nguva yekumirira inogona kupfupika pane zvaitarisirwa.
Kuonekwa kweiyo Terminal app hachisi chinhu chinopfuura kungobvumidzwa kuti Chrome OS ingori imwe yekuparadzira Linux, ehe, kugovera kusina GNU chisimbiso uye kuti zvinogona kunakidza kana chisimbiso ichocho chikawanikwa. Haufungi here?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Kugoverwa » Chrome OS inoburitsa chikamu chayo cheGnu / Linux ine yekuvandudza
Chrome OS ndeyevasikana vadiki
FreeCAD muchinjikwa-chikuva yemahara imwe nzira kuAutoCAD